NextMapping | Next Khariidadda ™ Markhaatiyada
Waxaan ka helnay jawaab celin aad uwanaagsan kaqeybgalayaasha dood cilmiyeedka khibradooda, waa tan waxa ay ka yiraahdeen kulankaaga:
Isku dheelitirka sida aan waqtigayga u isticmaalo.
“Saamaynta hoggaaminta. Qof kastaa waa hogaamiyaha mustaqbalka shaqada iyada oo aan loo eegin cinwaanka. ”
"Fikirka halista ah iyo sababta sababi karta in qofku sidaas wax u qabto."
"Xirfadaha haweenka ayaa loo baahan yahay mustaqbalka shaqada."
Saameyn xoog leh ayaad yeelatay!
Waana tan jawaab celin ka timid kooxdeyda:
Muhiimadda Cheryl waxay ahayd mid qalbi furan, waxay si furan ula wadaagtay sheekooyin shaqsiyadeed oo runtii laqeybsaday kaqeybgalayaasheena. Waanu qaddarinnay isku xidhka ka dhexeeya shaqada iyo nolosha dhabta ah; sida waxa noloshaada ka socdaa ay qayb ka yihiin sida aanu shaqada uga hawl galno. Waxay si khabiirnimo leh u jiidaysaa farriinta iyada oo la socota cilmibaaris ballaaran oo ay ku taageerayso qodobbada muhiimka ah. Qalabka buug-gacmeedka Cheryl waa ilo aad u fiican oo loogu talagalay is-hoggaaminta si loogu diyaar garoobo nooca shaqsiyadeed ee mustaqbalka shaqada.
Ku darista shaashad cagaaran iyo wax soo saar xirfad leh ayaa ka dhigtay muhiimada muusig ee ugu dhow sida ugu wanaagsan ee ay iyada qof ahaan ugu hadasho!
Waad ku mahadsantahay markale inaad ku darto qiimahaas aan caadiga aheyn dood cilmiyeedkeena! Waan sii wadi doonaa la socoshada horumarkaaga inta aad sii wado bixinta fikradaha weyn ee mustaqbalka shaqada.
C. Schroeder - Agaasime, CME
Rave kaqeybgaleyaasha kaqaybgalayaasha ee Cheryl's Virtual Keynote oo ka socota Dhacdada Horumarinta Hogaaminta Gaaska Enbridge:
“Waad ku mahadsan tihiin kooxda soo qaban qaabisay xafladan. Afhayeenku wuxuu ahaa mid aad u mashquuliya isla markaana bixiyay talooyin wax ku ool ah oo wax ku ool ah. ”
"Waxaan u arkay af-hayeenka inuu yahay mid firfircoon oo waxay u soo bandhigtay talooyin aad u khuseeya shirkadeena."
"Cheryl waxay ahayd in la sii qabsado waqti dheer!"
Cheryl khudbaddaada muhiimka ah ee muhiimka ahayd waxay ahayd qayb muhiim ah oo ka mid ah shirkeenna - waad ku mahadsan tahay daryeelkaaga, habeyntaada iyo muhiimadda dhiirrigelinta. ”
Qorsheeyaha Dhacdada - ServiceNow
Dib-u-fiirin ku saabsan Cheryl 'Virtual Keynote' ee ka soo jeeda EBAA 2020 Shirweynayaasha Shirka Onlaynka:
"Tani waxay ahayd soo bandhigid heer sare ah oo waqtigu kuma fiicnaan lahayn caqabadaha hadda jira ee aan dhammaanteen la kulanno."
“Runtii aad baan u jeclaa barnaamijka uu khudbad-bixiyaha muhimka ah u adeegsaday - malaha waa khibraddii ugu wanaagsaneyd ee dalxiis ee aan weli arko (uguna dhowaatay khibrad shaqsiyeed). Dib u dhigista sawirkeeda iyada oo ku habboon wixii ku jiray boggeeda. ”
Waan jeclahay isticmaalka Cheryl ee barxada taas oo fududeysay in aan raaco bandhigeeda isla markaana jabisay halyeeyga. ”
“Ujeedada Cheryl ee ku saabsan raadinta fahamka iyo helitaanka heshiis guud oo lala yeesho qodobada caqabada nagu ah, halkii aan dib u celin laheyn oo aan isku dayi laheyn inaan la dagaalano qodobadaas, waxay si gaar ah qiimo ugu laheyd isla markaana waqtigeeda ku timid warshadeena.”
“Kulankii aan la qaatay Cheryl wuxuu ahaa mid firfircoon oo dhiiro gelin leh. Maskaxda hogaaminta cusub iyo caqliga ayaa ka caawin doona ururada, hadii aysan hada isticmaalin moodooyinka, inay noqdaan kuwa ku guuleysta dhisida kooxda. ”
"Waxaan dareemayaa firfircoonaan iyo mustaqbal badan oo diirada saaraya sidii aan in muddo ah ku haystay!"
"Fikrado wanaagsan oo hoggaamineed oo wanaagsan."
“Soo bandhigga Cheryl runtii wuu xiiso badnaa, waxaanan bartay tilmaamo aan ku isticmaali karo shaqada.”
“Sifiican ayuu uhadlaa waqtiga - waxaan dareemay in aan xiriir la leeyahay bulshada ka dib casharkaan.”
Waad ku mahadsan tahay, Cheryl, muujinta / muujinta aragtidaada - bandhig weyn!
“Waxaan u maleynayay in NextMapping-ka uu ahaa mid aad u wanaagsan oo waqtigiisa ku habboon. ”
"Waqti ku habboon mawduucaan!"
Waxaan ka helay sida ay u tahay madaxa hadalka hoose ee boggeeda. Sooyaalkeedii hore kama aysan qaadin bandhigga filimka natiijada. ”
"Cheryl aad ayuu u fiicnaa!"
Waan jeclaaday tan. Muhiimadda dareenka ayaa loo baahan yahay. ”
"Doorashooyinka is-dhexgalka waxay ahaayeen kuwo kudarsaday bandhigga."
"Khudbad muhiim ah wuxuu ahaa mid aqoon badan leh wuxuuna ku talin lahaa mustaqbalka."
“Taasi waxay ahayd mid cajiib ah! Barnaamajyadaada casriga ahi waxay ahaayeen kuwo is-dhexgal ah oo hawl gal ah isla markaana dhagaystayaasha si habsami leh u qabtay. Waxay ahayd goobtii. ”
Shirka Shirka - EBAA
Agaasime - NWLS
“Aad u fiican. Mahadsanid! Waad ku mahadsantihiin mar labaad soo bandhigida weyn, Podcast iyo fadhiga dhimbiilaha. Waxaan helay tan oo jawaab celin wanaagsan ah dhammaan. Mar labaad mahadsanid! ”
H. Wetzel, Sr. Agaasimaha Suuqgeynta iyo Isgaarsiinta Xubnaha - NRECA
Keen fikradaha ka soo qeyb galayaasha Shirka Madasha ee 'BMO':
"Barasho aad u wanaagsan iyo fikir kicinaya fikirka saaka ee Mustaqbalka Shaqada - Mahadsanid."
“Cheryl aad ayaan ugu faraxsanahay inaan awoodno inaan kuu keeno macaamiisheenna ku baahsan Kanada, cilmi-baaristaada mustaqbalka iyo aragtidaada ayaa ah halka adduunku horeyba ugu socdo! Intaas oo kaliya maahan, laakiin waxaad tahay run run ah inaad la shaqeyso. Waxay ahayd wax lagu farxo. ”
"BMO waxay martigalisay" Mustaqbalka Shaqada - Sida loo noqdo Hogaamiyaha Diyaar Garowga Mustaqbalka "usbuucaan Cheryl Cran. Adduunyada otomatiga iyo digitationation-ka, waxaa muhiim ah in la fahmo in horumarka xagga teknolojiyaddu uu sare u qaado fursadaha guusha, iyo in la helo kooxaha ugu fiican ee la qabsan kara isla markaana la qabsan kara isbeddelka waxay keeneysaa abaalmarino, shaqooyinka ma yareynayso Waxay ku saabsan tahay awood u siinta kooxaha inay noqdaan kuwo waxtar badan oo diiradda saaraya baahiyaha ganacsiga aasaasiga ah. Qof macmiil ah ayaa mar ii sheegtay inay rabto inay bangiyada yareyso oo ay ganacsi badan gasho - taasi waa tallaabo ay ku noqoneyso shaqo mustaqbalka diyaar u ah. ”
“Waad ku mahadsan tahay, Cheryl, aqoon isweydaarsi aad u fikiray. Waxaad ka xanaajisay milicsiga tayada badan ee macaamiisheena iyo shaqaalaheena xaadirka ah maanta. Sidoo kale, waad ku mahadsan tahay xiisaha xiisaha leh ee u leh: xiriirka ka dhexeeya otomatiga iyo UBI — wada hadalka wanaagsan! ”
Aqoon isweydaarsi weyn oo ku saabsan mustaqbalka ururada diyaarka ah iyo hogaamiyaasha mustaqbalka ee diyaar u ah! Wadajir ahaan, aan u beddelno fekerka "aniga" una beddelo "innaga" Aad baan ugu faraxsanahay aqoonta aad wadaagteen intii aqoon isweydaarsiga socday. Ma sugi karo inaan aqriyo buugaagtaada! ”
“Subax dhiirigalin iyo soo jiidasho leh ayaan la leenahay macaamiisheenna BMO Financial Group ee Canadian Banking Commercial Banking iyo Cheryl Cran. Teknolojiyada goobta shaqada waa in loo adeegsadaa in loogu diyaar garoobo mustaqbalka iyadoo diirada la saarayo sida tikniyoolajiyaddu kor ugu qaadi karto natiijooyinka dadka. Waxay ahayd khibrad furitaanka indhaha ah si aan u barto sida aad tallaabo degdeg ah uga qaadi karto kordhinta iibsiga kooxda, la qabsiga iyo fulinta. ”
"Cheryl muxaadaradaada," Badalida Hogaanka & Mustaqbalka Shaqada, "waxay kufiicnayd kooxdeena hogaamiyaasha iyo dhamaan la-hawlgalayaashayada caalamiga ah.
Kooxdayadu aad bay ugu faraxsan yihiin inay kugu hayaan xafiiska madaxweynenimada ee Las Vegas waxaan ka helnay jawaab celin badan oo wanaagsan qof kasta oo goobta jooga iyo kaqeybgaleyaasha durba nool.
Waxaan aragnay wadahadallo badan oo Twitter ah oo ku saabsan qaar ka mid ah xeeladahaaga ku saabsan hoggaanka isbeddelka iyo mustaqbalka sida 'bartayaasha' iyo jebinta silos.
Waxaan dhamaanteen jeclaan lahayn inaan waqti dheeri ah ku helno adiga!
Aynu xiriir la yeelanno iskaashiyada mustaqbalka - mar kale mahadsanid. ”
Maamulaha Sare ee Caalamiga ah, Tayada - Teknolojiyada Aristocrat
Rave 'qoraalka' dib u eegista ka soo qaybgalayaasha Shirka ASQ:
"Tani waa tan ugufiican, uguna bandhig badan shirka."
“Tani waa hab fiican oo lagu dhiirigaliyo kaqeybgalka oo dadka looga caawiyo inay runti ku dhageystaan. Waad ku mahadsantahay wadaagida farsamadan hal-abuurka ah iyo waxyaabaha ku fiican. ”
“Waxaan ku fakaray tamartaada sare iyo waxtarkaaga. Waxaan jeclahay inaan isku xirnaado oo aan taladaada helo. ”
"Cajiib, Xusuus mudan, nafaqo leh, oo fikir kicinaya - MAHADSANID"
"Mahadsanid! Waan yeelayaa Soo bandhigid weyn maanta. Waad ruxday !! Si farxad leh ayaan u aqrin doonaa buuggaaga. ”
Aad iyo aad ayaan u bogaadinayaa sida aad u diyaar u tihiin inaad la wadaagtaan soo bandhigidaada iyo ilaha kale. Waxay muujineysaa kalsoonidaada & inaadan ka walwalsanayn abuuritaanka kaliya ganacsi la-talin. ”
“Qudus! @ $ & Soo bandhigid heer sare ah! Mahadsanid."
"JECEL isdhexgalka iyo waxyaabaha ku raaxeysta"
"Oh Super women - Waad ku mahadsan tahay dib-u-xoojinta" isbeddelku waa sharciga nolosha "
“Waad i dhiirrigelineysaa, Cheryl!
"Runtii waad i waxyooday!"
“Wanaagsan! Waxaad sidoo kale inbadan kahadashay arintan intii aad soo bandhigaysay. Aad baad ugu mahadsantahay inaad na shiday maanta. Dib ayaa laygu hagaajiyay.
Waad ku mahadsan tahay, waxaad tahay qof firfircoon oo dhiirrigeliya.
Kalfadhi weyn oo is-dhexgal ah. Waad ku mahadsantahay dhiirigelinta iyo waxqabadka! Cajiib ah. ”
Waan jeclaaday. Xaqiiqdii muuqaalka shirka. Mahadsanid!"
“Khudbad muhiim ah !!! Waan miyir qabaa! Isku dheelitirnaan weyn oo kaftan ah, xigmad, hawlgal iyo dhiirigelin ah sidii caadiga ahayd. Midka ugu fiican ilaa hadda! ”
“Soo bandhigida cajiibka ah mustaqbalkaaga wanaagsan ee mustaqbalka waa la is qaadsiinayaa. Waad ku mahadsan tahay dhiirrigelinta aad na siisay. ”
“Kulankii ugu fiicnaa illaa iyo hadda! Firfircooni iyo dhiirigelin leh ”
Cheryl waxay ahayd khudbadeena furitaanka furitaanka ee Shirkeenna Xirfadaha Innovation Unplugged in Toronto.
Wadahadalkeennii ugu horreeyay wuxuu ahaa mid iska cad in Cheryl uu aqoon durugsan u leeyahay Mustaqbalka Shaqada oo uu waqti ku qaatay inuu fahmo ujeeddooyinka ururkeenna iyo dhacdadeenna. Bandhigeeda wuxuu ahaa mid soo jiidasho leh oo xogwareysi leh waxayna dejisay inta ka hartay maalmaheena. Waxaan leenahay dhagaystayaal kala duwan oo ay kujiraan ardayda dhigata dugsiga sare, barayaal, khabiiro dhanka warshadaha iyo saraakiisha dowlada. Qof kastaa wax buu ka qaatay hadalka Cheryl oo wuxuu ku faallooday awoodda soo bandhigidda faallooyinkooda faallooyinka. Waxaan soo dhaweyn lahaa la shaqeynta Cheryl mustaqbalka markale. ”
Namir Anani - Madaxweynaha ICTC iyo madaxa fulinta
“Runtii aad ayaan uga helay khudbaddaadii muhiimka ahayd. Isla markiiba waa la qabsaday waana jeclaaday isdhexgalka. Inta badan oo dhan, xiisaha aad u qabto mustaqbalka shaqada iyo ganacsiga ayaa ka dhigay bandhiggaaga xitaa mid aan la iloobi karin. Fadlan ii soo sheeg dhacdooyinka mustaqbalka iyo mashaariicda aad ku lug leedahay. Waxaan jeclaan lahaa inaan maqlo adiga oo wax badan ka hadlaya hal-abuurnimada iyo farsamada.
Runtii farxad bay ii ahayd inaan maqlo adiga oo hadlaya. Waxaan rajeynayaa inaan kulmi doono, mustaqbalka dhow. ”
Martida Fasalka 9aad - Shirka Hal-abuurka ee ICTC
Cheryl waxay ahayd khudbadeena furitaanka ee tababarka sanadlaha AGA ee Hogaaminta Qaranka waxayna ahayd mid layaableh!
Muhiimadeeda waxaa cinwaan looga dhigay, "Farshaxanka Isbedelka Hoggaanka - Sidee Flex ugu Jilcdaa" Fariinteeduna runti waxay ahayd mid waqtigeedii ku dhacday oo qiimo sare ugu fadhiday ka qaybgalayaasheena. Waxaan ka helnay jawaab celin aad u wanaagsan kooxdayada ku saabsan qaabka gudbinta firfircoon ee Cheryl, codbixinta iyo isdhexgalka Q&A, iyo sahan ay u dirtay kaqeybgalayaasha si ay u bartaan dhagaystayaasheeda una qaabeeyaan soo bandhigideeda. Furitaanka furitaanka Cheryl ayaa ku bilaabay shirkeena xoog weyn - waxaan jeclaanay fiidiyowyada iyo muusigga oo qof walba farxad geliyay inta ka hartay maalinta. ”
J. Bruce Agaasimaha Kulamada
Cheryl Cran waxay ahayd khudbaddeena ugu muhiimsan ee munaasabaddeena sanadlaha ah ee hoggaanka iyada oo erey ahaan ay aad u fiicnayd. Aragtida gaarka ah ee Cheryl ee mustaqbalka shaqada iyo waxa looga baahan yahay shirkadaha inay ahaadaan kuwa hogaaminaya waxay kooxda u keentay qiime aad u weyn. Waxay waqti ku qaadatay in aan la tashado naftayda iyo kooxda hogaaminta dhaqamadeena kala geddisan iyo sida looga faa'iideysto wixii aan markii horaba si wanaagsan u qaban jirnay. Madaxdeenu waxay bixiyeen labo suul oo ah qaabka gudbinta Cheryl oo xawaare sare ku socday, toos ah oo firfircoon. Intaas waxaa sii dheer, hogaamiyayaashu runtii way ku riyaaqeen in Cheryl uu nagu soo biirey xafladaheena fiidnimo. Waxa aan ku helay qiime aad u weyn aniga oo ah agaasimaha guud ee shirkadda waxay ahayd sahan ka hor dhacdadii ay ku soo biirisay muxaadarradeeda iyo sidoo kale waqtiga codbixinta iyo qorista waqtiga dhabta ah taas oo runtii ku mashquulsan kooxdeena garashada leh. Cheryl kama aysan hadlin oo keliya mustaqbalka iyo isbeddelada ay dhab ahaan na siisay aaladda isbeddelka hoggaanka si loo abuuro heerkeenna xiga ee guusha. ”
B. Batz Maamulaha, Fike
“Kama mahadcelin karo Cheryl igu filan dhiirigelinteeda iyo xog-warrankeeda ku aaddan soo jiidashada dadka wax ka beddelaya shirkeenna JLT Canada Qaybta Dadweynaha 2018. Kalfadhigeedu wuxuu si hufan ula qabsaday dhagaystayaasheena degmada, laakiin sida kumanyaalka kun ee higsanaya inay noqdaan isbeddel sameeye maalin uun Kalfadhigii Cheryl wuxuu si gaar ah ula degay naftayda. Wufuuddeenuna ma joojin karin inay ka hadlaan waxyaabaha ku saabsan isdhexgalka ee soo bandhigisteeda - runti si wanaagsan ayey ugu shaqeysay sidii ay isugu xiri lahayd qof walba, macno ahaan! ”
P. Yung Suuqgeynta iyo Isgaarsiinta, Jardine Lloyd Thompson Canada Inc.
Cheryl waxay ahayd af-hayeenkeenii ugu dambeeyay ee shirkeena sanadlaha ah ee TLMI. Waxay si weyn ula dhacdey kooxdeena - muhiimada ay siiso fikradaha iyo cilmi baarista ku saabsan mustaqbalka shaqada waxay la xiriirtay kooxdan waxqabadka sare leh. Waan jeclaanay sida Cheryl ay ugu dartay taabashada gaarka ah sida sawirada munaasabadeena soo dhaweynta fiidkii ka hor waxayna tixraacday mid ka mid ah xubnaheena guusha iyadoo sidoo kale siineysa aragtiyo istiraatiiji ah. Isdhexgalka qoraalka iyo codbixinta waxay ahayd mid gaar ah waxaana lagu daray heer dheeri ah oo ka mid noqoshada wanaagsan ee dhagaystayaasha. Waxaan jeclaanay la shaqeynta Cheryl kooxdeenuna sidoo kale wey jeceshahay iyada. ”
D.Muenzer Madaxweynaha, TLMI
“Cheryl Cran waxay ahayd afurka furitaanka furitaanka ee 2018 CSU Xarumaha Maareynta Xarumaha oo iyadu aad bay u fiicneyd! Farriinteeda ku saabsan isbedelka, geesinimada iyo iskaashiga ayaa runtii ahayd waxa kooxdeenna looga baahan yahay inay maqlaan. Mustaqbalka looma baqayo in marka qofku ogaado inaad tahay naqshadeeyaha. Waxay la wadaagtay aalado la isticmaali karo oo aan kulligeen dib u laaban karno oo aan isla markiiba dalban karno si kooxdu u guuleysato. Adeegsiga Cheryl ee qoraalka iyo dhagaystayaasha iyo codbixinta si weyn ayaa loo bogaadiyey kooxdayaguna si firfircoon ayey ugu hawleen iyada oo adeegsanaya aaladahaas. Waan jecelahay sida Cheryl ay si ikhtiyaar leh uga jawaabto DHAMMAAN su'aalaha qoraalka oo ay ku jiraan kuwa ku loolamaya. Su'aalaha qoraalka waxaa lagu dhiirrigeliyaa muujinta dadweynaha ee dareenka qalbiga laga qabo. Kaqeybgaleyaal badan ayaa ka warbixiyay qoraal iyo barta Twitterka ee Cheryl furitaankiisa firfircoon ee furitaanka wuxuu gogol xaarey u yahay shir aad u wanaagsan oo laba maalmood soconaya.
N.Freelander-Paice Agaasimaha Barnaamijyada Cilmiga, Jaamacadda Gobolka California, Xafiiska Jaaniska
“Cheryl Cran waa Dhab ahaantii‘ Real Deal ’
Ma jiro hadal dhiirrigeliya oo ka fiican, khabiir cilminafsiyeedka jiilka, iyo lataliye hoggaanka isbeddelka ah marka loo eego Cheryl Cran. Cheryl gebi ahaanba waa la aamini karaa, daacad ah, daah furnaan, iyo soojiidasho leh iyada oo ka sheekeyneysa khibradeeda nolosheeda ee xaaladaha ganacsiga maanta iyo xaaladaha shaqada.
Ma haysto wax carbuun ah oo aan kula talinayo iyada shirkad kasta oo Fortune 100 ah oo wax ka qabata isbeddelka xag-jirka ah ee shaqaalahooda.
Adduunku wuxuu ahaan lahaa meel aad uga roon haddii ay raacaan talada Cheryl iyo talooyinka ku saabsan rajada inay la xiriiraan dadka kale iyo sida loola qabsado. ”
C. Lee Madaxweynaha, Ururka Shaqaalaha Raytheon
Cheryl Cran waxay ahayd aftahankeena muhiimka ah ee kulankeena hogaaminta iyo muxaadaradeeda oo cinwaankeedu ahaa: Abuuritaanka Mustaqbalkeena - Hogaaminta Isbedelka Si Loo Helo Waxaa jiray farriin xasaasi ah oo ay gaarsiisay waxay ahayd mid kuhaboon kooxdayada.
Cilmi baarista Cheryl ee mustaqbalka shaqada iyo isbedelada ay hogaamiyayaashu u baahan yihiin inay sameeyaan si loo helo halkaas waxay ahayd mid waqtigeeda ku habboon oo ku habboon kooxdeena. Daraasaddeeda oo ay weheliso gaarsiin firfircoon ayaa qiimo aad u qiimo badan u leh kooxdayada hogaaminta. Kooxdayadu sidoo kale waxay si xamaasad leh ugu biireen qoraalka su'aalaha iyo codeynta ay Cheryl ku dartay qoraalkeeda. Dhiirrigelinta oo ay weheliso fikradaha waxqabadka leh waxay ahaayeen kuwa uun ka mid ah qaadashada fikradda muhiimka ah ee Cheryl.
Munaasabaddeenii hoggaamineed waxay ahayd guul weyn waxaana ku soo darnay Cheryl muhiimada ay leedahay si aan u muujino guusha guud. ”
B. Murao Qiimeeye Ku Xigeenka, Qiimaynta BC
"Cheryl Cran waxay ahayd aftahankeenna ugu muhiimsan shirkeenna hoggaamineed iyada oo nuxurkeeduna cinwaankeedu ahaa:" Farshaxanka Isbeddelka Hoggaanka - Ka Dhig Meel Ka dhig Arrinta "waxay ahayd guul weyn oo lala gaadhay kooxdayada hoggaanka dukaanka.
Rubicon waxaan ku soo koraynaa kuna aragnaa isbedel badan oo gudaha ah oo isbedel dibada ah lagu soo rogay. Cilmi baarista iyo qaabaynta Cheryl ee kooxdeena ayaa saameyn nala yeeshay.
Waxaan ka mahadcelinayna qoraalka, doorashada iyo is-dhexgalka oo ay weheliso waxyaabaha la adeegsan karo, fikradaha waxqabadka leh iyo dabagalka jawaabaha su'aalaha qoraalka ee kooxaha.
Cheryl waxay ku bixisay ujeedooyinkeena waxayna ka caawisay kooxdayada hogaaminta dukaanku inay ka fikiraan siyaabo cusub oo sareeya oo ku saabsan isbedelka, isdhexgalka ganacsiga iyo guusha mustaqbalka. ”
R. Daryeel COO, Farmashiyeyaasha Rubicon
“Cheryl Cran wuxuu ahaa khudbaddeena ugu muhiimsan ee shirkii MISA BC ee dhaweyd ee loogu talagalay xirfadlayaasha IT-da ee degmada - muxaadarooyinka Cheryl waxay ahayd mid la dhacsan kooxdeena!
Waan ku qancay waxyaabo badan oo aan ku soo qaatay Cheryl's keyynote - waxaa jiray isku dheelitirnaan dhammaystiran oo ka kooban, cilmi baaris iyo fikrado ay weheliso dhiirigelin.
Jawaab-celinta ka-soo-qaybgalayaashayadu waxay ahayd ifafaale waxayna ku mahadnaqeen awoodda ay u leeyihiin inay su'aalo u soo diraan Cheryl iyo jawaabaheeda cad ee ay weheliso codbixinta si loo hawlgeliyo kooxda.
Kaqaybgalayaashu waxay ka tageen dareenka muhiimka ah ee Cheryl dareenka firfircoon, dhiirigelinta iyo diyaar u ahaanta inay qaataan fikradaha iyo ficil dib ugu noqdaan goobta shaqada isla mar ahaantaana la dhigo meel isla markiiba guusha.
Cheryl way dhaaftay wixii aan ka filaynay! ”
C. Crabtree Guddiga Shirka, Ururka Nidaamka Macluumaadka Degmooyinka ee BC (MISA-BC)
“Waxaan aad ugu boorinayaa Cheryl Cran mustaqbal shaqo iyo isbadal khabiir dhanka hogaaminta ah oo kaa caawin kara mustaqbalkaaga adduunkan isbeddelka. Waxaan soo qaatay tababarayaal runtii aad uwanaagsanaa sanadihii aan ku jiray iskuulka. Tababarayaasha waaweyni way cadahay markaad aragto natiijada koox shakhsiyaad ah oo u wada shaqeeya sidii jir isku xidhan. Isboortiga, muusiga, qoob-ka-ciyaarka - dhammaantood waxay leeyihiin abaalmarinno iyo aqoonsi tababarayaal waaweyn. Tababbarka aan u qabto shaqaalahaygu wuxuu ahaa waxyaabo horyaalla oo yar. Waan ogaa in haddii aan doonayo waxqabadka koox xirfadle ah aan u baahanahay tababare xirfad leh. Cheryl Cran ayaa sidaa u ah Kooxda Hoggaanka MyMutual. Waxaan marki ugu horreysay la kulanay Cheryl Cran sanadkii 2014 markii la waydiiyay inay noqoto af-hayeenka muhiimka ah kulankeena sanadlaha ah ee 'Broker Seminar'. Cheryl waxay timid goor hore, waxay la kulantay ka soo qayb galayaasha waxayna siisay muxaadaro cajiib ah oo ku saabsan Isbedelka Hogaanka. Cheryl waa qof ku hadla magaca ugu sarreeya. Dariiqa labaad ee aan ku aqaan Cheryl waa Tababaraha Fulinta. Waxay labadaba tababare iyo lataliye u ahayd koritaankeyga shaqsiyeed ee Agaasime Guud. Haatanna iyadu waa tababarahaas Kooxdayada Hoggaaminta, iyada oo nagu xujeynaysa isla markaana nala xisaabtameysa. Kooxdayada Hoggaamineed ayaa qaadanaya NextMapping Training Leadership Training koorsada waxaa bixiya Cheryl Cran. Koorsooyinka waxaa laga heli karaa khadka tooska ah waxaana ka mid ah hal wicitaan macalin. Waxaan awoodnaa inaan ku dabaqi karno wixii aan ku baraneyno xaaladaha nolosha dhabta ah anagoo taageero ka heleyna tababare kooxdeena ah. Siyaabaha gaarka ah ee ay tababbaraha iyo la tashiga Cheryl ay caawisay waa:
Ku caddaynta himiladeenna iyo himilooyinkeena taasoo naga caawisay inaan kordhinno qiimaha shaqaalaha iyo macaamiisha
Tilmaanta helitaanka 'dadka saxda ah' kooxda si ay ganacsiga ugu wado mustaqbalka
Dhiirrigalin iyo kheyraad gaar ah oo naga caawiya inaan shaqaaleysiinno, tababarinno oo aan kobcinno xubnaha kooxdeena
Fududaynta kooxda hogaaminta si loo kordhiyo xirfadaha, shaqada kooxda iyo lagula xisaabtamo yoolalka
Waxay naga caawineysaa inaan sare u qaadno fikirka istiraatiijiyadeed, abuurno dhaqan hoggaamiye wadaag ah oo aan kordhinno hawlgelinta shaqaalaha
Tamarta korodhay iyo xiisaha mustaqbalka iyo sida aan ugu abuuri karno koox ahaan ”
V. Fehr - agaasimaha guud MyMutual Caymiska
Waxaan Cheryl soo ceshanay mar labaad si aan u fududeyno isla markaana muhiim u ah dib u gurashada sanadlaha ah ee 1.5 ee shaqaalaha magaaladeena, deganayaasha loo qoondeeyey, bulshada ganacsatada iyo daneeyayaasha kale ee magaalada, waana guul weyn. Waxaan kaqeybgalayaasha dhihi jirnay inay xitaa kafiicantahay sanadkaan sanadkii lasoo dhaafay waxaana loo aaneynayaa Cheryl karti iyo fududeeyn khabiirnimo, la falgalkeeda kaqeybgalayaasheeda iyo diyaarinta. Cheryl waxay lahadashay midkastoo martida kuhadashay ajandaha kahor munaasabada waxayna hubisay in ajandaha lawareegayo si ay saameyn ugu badan ugu yeelato guud ahaan dib u gurashada. Mawduucayagu wuxuu ahaa 'NextMapping' mustaqbalka shaqada oo ay ku jiraan hal-abuurnimo, tikniyoolajiyad, hoggaamin iyo dhaqan. Cinwaankeeda muhiimka ah inta lagu jiro dib u gurashada waxaa ka mid ahaa furitaanka, xirnaanshaha maalinta koowaad iyo dhamaadka maalinta labaad. Cheryl waxay leedahay karti gaar ah oo ay ku keento hab ku habboon oo dhiirrigelin leh oo abuuraysa xalal cusub iyo sidoo kale habab wax ku ool ah oo lagu dabakhi karo fikradaha la wadaago. Qoraalkeeda furan, waxay dejisay dhawaq dhiirigelin leh oo ku saabsan mustaqbalka shaqada oo ay ku jiraan saameynta tikniyoolajiyadda iyo sida dadku ugu baahan yihiin inay la qabsadaan xawaaraha degdegga ah ee isbeddelka. Mawduuceeda xiritaanka maalinta koowaad waxay diiradda saartay NextMapping mustaqbalka hoggaaminta iyo waxa ay uga dhigan tahay mustaqbalka shaqada kooxaha iyo ganacsatada. Kuwii kahadlay ajandaha waxay kahadleen magaalooyin caqli badan, meherado heer caalami ah, hal-abuurnimo, fikir hal abuur leh, keydin taariikhi ah oo taariikhi ah, diyaaradaha aan duuliyaha laheyn iyo kuwa kaloo badan. Maalintii 2 Cheryl waxay dib u soo koobtay maalintii oo dhan iyo badhkeed waxayna ku soo dartay waxyaabo muhiim ah af-haye kasta oo ku jira udub-dhexaadkeeda xidhitaanka. Waqti kasta oo aan lashaqeyno Cheryl waxaan ka faa'iideysanay hal-abuurnimada kordhay, iyo wada shaqeynta kooxdeena magaalada. Waxaan u aragnaa Cheryl inay tahay qayb muhiim ah oo ka mid ah diiradeena hal-abuurnimada sanadlaha ah waxaana rajeyneynaa inaan la shaqeyno iyada marar badan, marar badan mustaqbalka. ”
W. Foeman - Karaaniga Magaalada Magaalada Coral Gables
“Cheryl waxay ahayd khudbadaheena ugu muhiimsan madasha dhaqaalaha ee UVA oo waxay soo bandhigtay“ Mustaqbalka Shaqadu Waa Hada - Diyaar Ma Tahay? ” Jawaabta ka timid dhagaystayaasheena waxaa ka mid ahaa faallooyin sida: "Aragti wacan iyo dhiirigalin mustaqbalka" "Waxaan jeclaaday isku dhafka waxqabadka oo ay weheliso riixitaan si ay nooga caawiso inaan noqono kuwo hal abuur leh" "Fikradaha ciqaabta ee ku saabsan sida aan u abuuri karno una kordhin karno waqtiga dhabta ah hal-abuurka guusha mustaqbalka ”" Cilmi baaris heer sare ah iyo tirakoobka mustaqbalka shaqada iyo sida ay ugu habboontahay waxbarashada iyo ganacsiga labadaba "" Waxaa dhiirigaliyay Cheryl Cran "Waxaan hubaal ahaan laheyn inaan Cheryl dib u helno si aan u siino aragtiyo dheeri ah mustaqbalka shaqada, hal-abuurka iyo isbedelka hogaaminta.
B. Jaamacada Joyce University Virginia
Cheryl Cran wuxuu caan ku ahaa shirkeena ISBN. Waxyaabaha ay ka kooban tahay Cheryl waxay ku haboonaayeen kooxdeena fuliyaasha C-Level sidii ay uga caawisay iyaga inay abaabulaan shir ay ka buuxaan fikradaha istiraatiijiyad la taaban karo oo ay ku horumarin karaan ururkooda. Kooxdayadu waa mid aad u garasho badan waxayna dhaliil u jeedin karaan kuwa ku hadla meel ka baxsan saloonada iyo warshadaha isboortiga, laakiin furaha muhiimka ah ee Cheryl ayaa ku saxan lacagta. Cheryl waxay u habeysay astaamaheeda kooxdeena, Mustaqbalka Shaqada Hada Waa - Salonkaagu Diyaar Ma yahay? fariinteeduna waxay ahayd isku dheelitirka saxda ah ee cilmi baarista, fikradaha laxiriira, iftiiminta waxay eegeysaa mustaqbalka iyo sidoo kale u diyaar garowga carqaladeynta mustaqbalka. Si ka duwan inta badan astaamaha, Cheryl waxay si firfircoon u soo bandhigtay qalabka wax lagu ciyaaro, oo ay ku jiraan fiidiyow fiidiyoow ah waxayna sidoo kale u soo bandhigtay sahaminta kaqeybgalayaasha iyo sidoo kale sameynta kaqeyb qaadashada codbixinta tooska ah oo ay kujirto ra'yigooda ku saabsan muhiimada ay leedahay. Waxaan sidoo kale Cheryl u fududeynay dood maskaxeed ku saabsan soo jiidashada tayada sare kooxdeeduna ay ahayd qolka taagan oo kaliya. Kama waaban doonno inaan iyada kula talino kuwa kale.
V. Agaasimaha Fulinta Tate Shabakada Ganacsiga Caalamiga ah ee Salon Spa
Cheryl Cran waxay ahayd aftahankeena muhiimka ah iyo fududeeyaha aqoon isweydaarsiga ee Shirkeena Calgary Stampede Leadership Summit. Muhiimadeeda: Kooxaha Diyaargarowga Mustaqbalka - Sida Loo Abuuro Agile, Laqabsashada iyo Kooxaha Diyaar garowga Mustaqbalka waxay ahaayeen wax lala yaabo oo aad ugu mashquulsan hoggaamiyeyaasha dadkeenna.
Intii lagu gudajiray aqoon isweydaarsiga, inbadan oo kamid ah hogaamiyaasheena dadkeena waxay qoraal u diraan Cheryl inta lagu gudajiray muxaadarada waxayna aad ugu amaaneen sharaxaada buuxda iyo jawaabaha dhabta ah. Dadkeenna hoggaamiyeyaashu way ku faraxsanaayeen waxa ku jiray oo waxay aad u jeclaayeen inay ku dabaqaan doorkooda waxa ay baranayaan. Waqtiga iyo daryeelka Cheryl ee diyaarinta iyo hubinta inay la jaanqaadi karto kooxdeena si weyn ayaa loogu riyaaqay oo ay kujirto sahankeedii hore ee kaqeybgalayaasha, codbixinta wadajirka ah inta lagu gudajiray muhiimada iyo waliba fariinta qoraalka ee su'aalaha. Cheryl ayaa qaabaysay waxa ay umuuqato ka faa ideysiga tikniyoolajiyadda iyadoo dadka kaqeyb galineysa kuna dhiirigalinaysa inay 'aniga ilaa aan' ka tagno.
Cheryl waxay siisay aragti wanaagsan oo ku saabsan isbeddelada mustaqbalka ee saameynaya ganacsiga waxayna siisay fikrado hal abuur leh oo ku saabsan sida aan uga faa'iideysan karno guusheena. Habka Cheryl waa mid caqli gal ah, cilmi baaris ku saleysan isla markaana si heer sare ah u dhexgala taas oo ahayd tii ugu habooneyd kooxdeena garashada leh. “
D. Bodnaryk - Agaasimaha, Adeegyada Dadka
Bandhigga Calgary iyo Stampede Ltd.
“Waxaan ku faraxsanahay inaan Cheryl Cran kala qeyb qaato koox weyn dhammaan aqoon isweydaarsiga shaqaalaha, oo ka kooban dhowr boqol oo shaqaale ah. Cheryl waxay soo bandhigtay Mustaqbalka Shaqadu Waa Hada - Diyaar ma u tahay munaasabadan maanta socota. Iyadu ma aysan bixin oo keliya cinwaan muhiim ah, laakiin sidoo kale waxay soo koobaysaa gabagabada maalinta si kor loogu qaado macnaha / macnaha sameynta khibradaha ka soo qeyb galayaasha. Waxaan ku qanacnay awooddeeda ah inay ku darto dhinacyada dhammaan howlaha maalinta marka la soo gabagabeynayo soo-koobitaankeeda - iyada gaarka ah iyo garashada leh ee ay ku soo xusho waxyaabaha u gaarka ah dhaqanka kooxda ayaa runtii istaagay. Dadkii goobjoogga ka ahaa maalintaas waxay ku sifeeyeen gaarsiinta muhiimka ah Cheryl mid firfircoon oo firfircoon. Hal shaqsi ayaa la wadaagay inay iyadu abuurtay tamar aad u badan, way fududahay in lagu farxo waxa qolka ka dhacaya. Nuxurka iyo xiritaanka Cheryl waxay ahaayeen cunsur muhiim u ah aqoon-isweydaarsigeenna maalinlaha ah, oo si weyn ugu daray 'guushiisa'. Xaqiiqdii waxaan ka fiirsaneynaa la shaqeynta marlabaad waxaanan si aad ah ugula talinayaa Cheryl Cran inay noqoto afhayeen ururada soo foodsaaray isbadal ama laga yaabo inay rabaan inay sahamiyaan mowduucyada isbadalka, hanaanka ganacsiga, ama dhiirigelinta. Waad ku mahadsan tahay, Cheryl waxaad leedahay qaab fiican oo ereyo leh. ”
L. Masse Ground Sare
Cheryl waxay ahayd taam ahaanta saxda ah ee Shirkeena Mustaqbalka - waxaan haynaa koox aad uqurux badan oo ah hogaamiyaasha ururada amaahda kuwaas oo ku faana inay kujiraan hogaaminta hormoodka, Cheryl-na waxay ku xujeysay inay ka fikiraan xitaa hal abuurnimo, iyo inay fidiyaan qaabkooda hal abuurka iyo sidoo kale in la dhiso istaraatiijiyad mustaqbal ku saleysan xaqiiqooyinka degdegga ah ee isbedelaya ee ku jira warshadaha adeegyada maaliyadeed. Waxaan si aad ah ugula talin lahayn Cheryl Cran inay noqoto mustaqbal khabiir dhanka shaqada ah iyo aftahan muhiim ah. ”
J. Kile Futures Summit Summit Sumcadda Midawga MN
Soo bandhigida Cheryl ee Mustaqbalka Shaqada waxay bixisay saacad is dhexgal iyo mashquul ah si aan u bilowno munaasabadeena. Martidayadu waxay si gaar ah u jeclaayeen kaqeybgalayaasha kaqeybgalayaasha iyo ficillada ku saleysan caddeynta ee ay isla markaaba dib ugulaaban karaan kooxahooda si ay ugu dhaqmaan. Waxay ka saartay beerta dhexdeeda dhagaystayaasheena 350 HR, qorista iyo xirfadlayaal horumarinta hibada leh. ”
J. Palm, Maareeyaha Maamulka TeamKC: Nolosha + Hibo
“Munaasabadda shaqaalaheenna sannadlaha ah, Cheryl waxay soo bandhigtay cinwaan muhiim ah oo muhiim ah oo muhiim ah kuna saabsan mustaqbalka shaqada iyo saameynta ay nagu leedahay. Waxay si dhow ula shaqaysay annaga si aan u habaynno cinwaankeeda si ay u hubiso inay macno u leedahay oo ay quseyso shaqaalaheena. Hadalka Cheryl wuxuu ahaa mid kicinaya oo lagu keenay tabar wanaagsan. ”
LN, Madaxa Fulinta Madaxa Hawlgabka BC
WB, Cilmi baarista & Horumarinta BASF
CEO Ururka Suuqgeynta Qaranka Agra
Cheryl waxay naga shaqeysay dib u gurashadii magaalada ugu horeysay. Dib-u-gurashadu waxay diiradda saartay mowduucyada ballaadhan ee hal-abuurnimada iyo isbeddelka hoggaaminta. Waxaan ku martiqaadnay kuwa hadla inay dib u gurashadeenna ahaayeen macaamiil gude iyo dibadba ururkeenna. Khabiirnimada Cheryl waxaa lagu arki karay wax kasta oo ay ka mid yihiin qorshaynta hore ee dhacdada iyo inta lagu jiro maalin iyo badh dib u gurasho dheer. Intii lagu guda jiray dib u gurashada, Cheryl wuxuu ahaa nin xirfad leh oo isku xira isla markaana ka caawiya hogaamiye kasta inuu khariidadeeyo mustaqbalkooda naftooda iyo ganacsigooda. ”
W. Foeman Magaalada Coral Gables
Waxaan la shaqeeyay Cheryl dhowr jeer dhacdo walbana waxay ku garaacdaa beerta. Waxay dhageysataa waxa aad u baahan tahay iyo waxaad isku dayeyso inaad ku guuleysato dhacdadaada, waxay la timid fariin wax ku ool ah oo leh muuqaallo xusuus mudan oo dhiirrigelinaya dhagaystayaasha. Qiimaynta bandhigyada Cheryl had iyo jeer waa calaamado aad u sarreeya. Iyadu waa dhab, firfircoon oo xirfad leh. Markasta ayay umushaa!
Madaxa Sarkaalka Fulinta ee CREW Network Foundation
“Waxaan ku casuunnay Cheryl inay nagala soo qeyb gasho sida hadalka udhigga kulanka sanadlaha ah ee 2017 Association Canadian for University Continue Education. Cinwaanka guud ee Cheryl "Hoggaaminta Isbadalada Hadda" waxay ku fiicnayd kooxdeena barayaasha. Cheryl waxay diyaarisay iyadoo sahamineysa ka soo qeyb galayaasheeda waqti kahor waxayna u diyaarsatay hadaladeeda si wax looga qabto baahiyaheena gaarka ah iyo xaalada. Wufuudda shirku way ku faraxsanyihiin qaabkan loo qaabeeyey. Fariinta muhiimka ah ee Cheryl waxay caqabad ku noqotay fekerkeena sida aan ugu baahanahay inaan horumarino maareyaasha hal abuurka sida hogaamiyayaasha isbedelka iyo sida aan ugu baahanahay inaan udiyaar gareyno ardayda sii wadaysa waxbarashada si ay diyaar ugu noqdaan shaqada mustaqbalka. Moodooyinka Cheryl ee wareegga isbeddelka iyo afarta marxaladood si kor loogu qaado hoggaamiyeyaasha waxay ahaayeen aalado aad u faa'iido badan oo aan ka qaadi karno isla markaana aan isla markiiba ku dabaqi karno. Waxaan qiimeynay qaabkeeda iskaashiga ah ee ku saabsan ka dhigista shirkeena guul weyn.
Dean pro cimriga barashada Jaamacadda Simon Fraser
“Cheryl Cran waxay ahayd xiritaanka furaha af-hayeenka u ah socdaalkayaga 2017 ee Safarrada Khibradaha ee Atlanta iyo Chicago, iyaduna waxay ahayd ifafaale! Awood aad u weyn si ay maalinta u xidho ugana tagto kaqeybgalayaashu dhiirigelinta waxqabadka. Mustaqbalka baarista Cheryl ee baarista shaqada ayaa iftiimisay baahida loo qabo in diiradda la saaro khibradda shaqaalaha taas oo micnaheedu yahay abuuritaanka khibrad macaamiil weyn. Waxay siisay labada fikradood iyo xalalka hogaamiyaasha inay mustaqbalkooda shaqo diyaar u noqdaan. Jawaab-celinta kaqeybgaleyaashu aad bay u fiicnaayeen wayna jeclaayeen sida Cheryl runtii iyaga uga dhigtay fikirka! Cheryl wuxuu ahaa xidig kooxeed run ah. Dhacdooyinkayagu waxay ahaayeen guul weyn, waxaanan uga mahadnaqaynaa qaybteedii taas.
Agaasimaha Suuqgeynta Appirio
Waxaan dhowaan lahaan jirnay Khabiirka Mustaqbalka Shaqada Cheryl Cran oo ah Af-hayeen Muhiim ah Shirkeenna sanadlaha ah ee Mashruuca Dunida / Falanqaynta Ganacsiga, erey ahaanna heer sare ayey ahayd! Ka qeybgalayaasheena waxay ku qiimeeyeen Cheryl inay tahay mid ka mid ah kuwa ugu waaweyn ee ka hadlaa iyo muhiimada ay leedahay "Mustaqbalka Shaqadu Waa Hada - 5 Isbadalada Xagjirnimada ee Mustaqbalka" ayaa ahaa wax lagu dhuftay. Qaabka wada tashiga Cheryl ee muhiimada ay u laheyd ayaa si weyn loogu qadaray - waxay ku dartay xog laga soo uruuriyay ka soo qeyb galayaasha iyadoo muxaadarada ay siisay xalal iyo fikrado habeysan oo isla markiiba ficil ahaan loogu dhaqmi karo dhagaystayaasha. Isku-darka tamarta firfircoon, hoggaaminta fekerka, waxyaabaha dhabta ah ee la xiriira iyo madadaalo iyo soo jiidasho leh ayaa ah habka ugu habboon ee kooxdeena hoggaamiyeyaasha mashruucyada kala geddisan iyo falanqeeyayaasha ganacsiga. Waxaan rajeyneynaa fursad aan kula shaqeyno Cheryl markale. ”
Agaasimaha Dhacdooyinka Kooxda MashruucaWorld*GanacsadeAnalystWorld
Anigoo ku hadlaya magaca aaga loo yaqaan 'New Innovation Zone' iyo LexisNexis Canada, waxaan jecelahay inaan idiinkaga mahadceliyo soojeedintaadii aad ka soo jeediseen shirweynaheena cusub ee Isniinta. Jawaabihii aan ka helnay dhacdada iyo furahaaga, gaar ahaan, ma ahayn wax togan laakiin waa togan yahay. Soo bandhigistaadu waxay ahayd dariiqa ugufiican ee aan uga maareyn karno maalinta, annagoo ka fikirna hal-abuurnimo macno ballaaran.
Maareeyaha Mashruuca Kooxda Sumcadda Qaanuunka Sharciga
Waxaan goob joog ka nahay Cheryl, "Hogaaminta Isbedellada - Jabinta Silo" shirweynaheena qaran ee PRSM waxayna ahayd mid ku dhacday kooxdeena garashada ee kaqeybgaleyaasha. Xirfadaha tafaariiqda tafaariiqda, qaar badan oo ka mid ah xubnaheena urur ayaa waxaa lagu loolamayaa sida loo wada shaqeyn lahaa, loo habeyn lahaa loona hogaamin lahaa heerar sare. Kalfadhiga Cheryl wuxuu bixiyay cilmi baaris ku saabsan mustaqbalka shaqeynta, aragtiyo kicin leh oo ku saabsan hogaaminta loo baahan yahay, iyo fikradaha xikmadda leh ee ku saabsan sida loo xiro silos loona dhiso dhaqan iskaashi iyo hal abuur badan. Qaabkeeda tamar aad u sareeya iyo adeegsiga is dhexgalka madadaalada, filimada filimada iyo aragtiyaha fiidiyowgu waxay ahaayeen kuwo saameyn leh. Cheryl wuxuu bixiyay wicitaanno ficil iyo tusaalooyin ah 'sida loo noqdo' hoggaamiye isbedel ku keeni kara isbeddelka hadda iyo mustaqbalka shaqada. Natiijadii ka soo baxday Cheryl waxay ka kooban tahay iyo qiimeyn sare, waxaan go'aansanay inaan dib u soo celinno si ay uga soo qeyb gasho Shirka Sannad-dhexaadka ah. ”
Madaxweyne kuxigeenka hormarinta xirfada Ururka PRSM
Waxaan qabanay shirkii sanadlaha ahaa ee Gartner ee loogu talagalay Xarunta Xogta, Kaabayaasha Dhaqaalaha, & Hawlwadeenada waxaanan dib u soo celinay Cheryl Cran, mustaqbalka shaqada iyo khabiir ku takhasusay hogaaminta, si aan u soo bandhigno iyadoo qayb ka ah raadkeena hogaaminta. Kalsoonidii Cheryl fadhigeedii Hogaaminta @ Muhiimka Isbadalku wuxuu ahaa mid horay loo siiqday oo markale markale la buuxiyay sanadkaan. Dhageystayaasheena caqliga badan ee hogaamiyaasha IT-da waxay raadinayaan xalal la taaban karo, fikrado iyo dhiirigelin maadaama loo xilsaaray awoodsiinta, saameynta iyo bedelida goobahooda shaqo mustaqbalka shaqada. Cheryl waxay si dhab ah u soo gudbisay wixii loo baahnaa iyo in ka sii badan - cilmi-baaristeeda iyo tirakoobkeeda, oo lagu soo bandhigay fiidiyoow, iyo qaabkeeda tooska ah ee isdhexgalka ayaa runtii ku dhacday kooxdeenna. Waxaan rajeyneynaa inaan mar kale la shaqeyno Cheryl. ”
“Cheryl Cran, Mustaqbalka Shaqada iyo Khabiirka Hogaaminta Isbedelka waxay runtii ahayd mid cajiib ah cinwaankeeda“ Mustaqbalka Shaqada - Qof walbaa waa Hogaamiye Isbadal ”- waxaan laheyn hadalo ay ka mid yihiin“ Cheryl wuxuu ahaa af-hayeenka ugu wanaagsan ee aan waligey haysanay ”sidoo kale Qaabka Cheryl ee u adeegsiga is dhexgalka oo ay la socoto madadaalo iyo waxyaabaha ku kalifay waxay ahayd ifafaale ”. VIP-dayada mid walbaa wuxuu helay koobi buugga Cheryl '' The Art of Change Leadership - Driving Transformation In a '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' ' Cheryl iyo maamuleheeda xafiiska Michelle waa koox firfircoon - si sahlan loogala shaqeyn karo kahor, inta lagu gudajiro iyo ka dib dhacdada. Waad ku mahadsan tahay Cheryl sida aad noo caawisay inaan siino qiime aad u sarreeya ka soo qayb galayaasheena AIIM 2017 ″
G. Clelland, Dhacdooyinka VP AIIM
Waxaan Cheryl nagu soo biirinay anaga oo ah Fariin Muhiim ah oo Loogu Talo Galay Shirweynaheena GEA ee ka dhacay Puerto Vallarta bishii Janaayo 2017. Cilmiga Beeraha Cheryl Mustaqbalka Beeraha ayaa HADA! Guul weyn ayey ka gaadheen dhagaystayaasheena kuwa fahma ganacsatada iyo macaamiisha warshadaha beeraha. Qaabkeeda tooska ah ee firfircoon walibana ku mashquulsan fikirka iyo fikirka cilmi baarista ee kicinaya waxay abuurtay buunbuunin kooxdayada. Cheryl wuxuu siiyay aragtiyo ku saabsan mustaqbalka hogaaminta iyo sida hogaamintu isu beddeleyso iyadoo laga jawaabayo tikniyoolajiyadda sii kordheysa iyo isbeddelada tirakoobka. Waxay ku doodday kooxda inay horumariyaan xirfadahooda hogaaminta iyagoo kor u qaadaya 'nidaamyadooda hawlgalka' oo ay ka mid yihiin abuuris dheeraad ah, hal abuur iyo awoodo sii kordheysa si ay u hogaamiyaan kooxo jiil badan. Istaraatijiyaddeeda ku saabsan qorista iyo sii haynta waxay ahayd furitaanka indhaha waxaanna jecel nahay in ay bixiso 'baaqyo ficil' oo loogu talagalay dhagaystayaasha si ay ugu laabtaan goobahooda shaqo. Cheryl wax weyn ayey ku aheyd kooxdeena! ”
Cheryl Cran waxay ahayd udub dhexaadkayaga shirkii Central 1 Credit Union waxayna ahayd dooqa saxda ah ee saxda ah! Muhiimaddeeda waxay ku salaysnayd buugeeda cusub, Farshaxanka Hoggaanka Isbeddelka wuxuu ahaa dhab ahaan waxa kooxdeenna ka mid ah hoggaamiyeyaasha Credit Union u baahdeen. Qaar badan oo kamid ah hogaamiyaasha ayaa faalleeyay inay barteen wax cusub, inay qiimeeyeen qaabka Cheryl uqaato mustaqbalka shaqada iyo isbedelka hogaaminta. Qaab-dhismeedkeeda muhiimka ahi waa madadaalo, is-dhexgal, fikir kicis ah oo dhammaantoodna waxay bixiyaan fikrado wax ku ool ah oo hoggaamiyeyaashu isla markiiba isticmaali karaan. Cheryl wuxuu ahaa waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee shirkeenna.
Bartamaha 1 Credit Union
Cheryl Cran waxaa si weyn ugu taliyay koox kale oo Kaiser ah oo ay isla soo shaqeeyeen- dhawaana waxaan u kireysanay inay naga noqoto Gudoomiyaha Af-xidheenka u ah kulankeena sanadlaha ah - waa sidee taam buuxa! Farriinta Cheryl si buuxda ayaa loo habeeyay iyada oo ku saleysan ganacsigeenna, dhagaystayaasheena kala duwan waxayna si qurux badan u xirtay shirkeenna. Waxay awood u yeelatay inay ka dhex-dhexaadiso waxyaabaha ay ka kooban tahay qaybaha kale ee barnaamijka iyo sidoo kale la jaanqaadka caqabadaha gaarka ah ee dadka kooxdeennu ay la tacaalayaan oo ay siiyaan fikrado dhiirrigelin leh. Taariikhdeeda ganacsi iyo waaya-aragnimadeeda oo ay weheliso aragtideeda garashada leh iyo gaarsiinteeda firfircoon waxay kooxdeena siisay dhiirrigelin waxayna ahayd qaab fantastik ah oo lagu soo gunaanado shirkeenna! ”
Macaashka Shaqaalaha Dawlada Dhexe ee VP, Kaiser Permanente
Cheryl Cran maahan Sheryl Crow laakiin iyadu waa xiddig dhagax weyn oo aan yareyn! Waxaan Cheryl u noqonay af-hayeenkeena udambeeya ee barnaamijyada taxanaha ah ee kooxaheena hogaaminta. Cheryl waxay nagala shaqeysay in kabadan darsin dhacdooyin ah halkaas oo ay ugu dhiibtay ilaa 6000 hogaamiye kooxeedyo mustaqbal diyaar ah. Awooddeeda inay ku xirxirto farriimaha soo-jeediyaasha kale, awooddeeda ay kula macaamilayso kooxaha qosol, madadaalo, saxnaansho iyo fikir daandaansi ah waxay ahayd mid aad u fudud oo layaableh isla markaana si sax ah wixii aan ugu baahanahay ku dhowaad dhacdooyinkeenna. ”
“Cheryl Cran wuxuu ahaa maalinteena 2nd keyword subaxnimadii shir sannadeedkeenna Sebtember 2016 iyo erey 'WOW!' Cheryl waxay keentaa tamar aan caadi aheyn, aragtiyo, fikrado la adeegsan karo iyo waxbadan oo kujira keydegyadeeda. Kooxdayadu waxay jeclayd qaabkeeda ka-qaybgalka iyo qaab-dhismeedka loo dhan yahay oo ay kujirto haysashada farriinta qoraalka dhagaystayaasha oo ay u adeegsato warbaahinta bulshada in ay weydiiso su'aalaheeda iyada oo ku xusneysa qoraalkeeda - aad ayey u kacsan tahay! Waxay naga qoslisay oo waxay na siisay inaan si fiican u fiirsano nafteena si aan u aragno hadii aan nahay hogaamiyeyaasha isbedelka. Jeceshahay isku dheelitirka isdhaxgalka dhagaystayaasha oo ay weheliso moodooyin aad u xoog badan oo dadka siiya 'sida' ay u noqon karaan hal abuur dheeraad ah iyo sida loogu noqon karo laqabsashada mustaqbalka shaqada. Qof walba wuxuu ka tagay fadhigiisa isagoo dareemaya awood, xoog isweydaarsi diyaarna u yahay inuu mustaqbalka wax ka qabto!
J. Moore Hay'ada Xirfadleyaasha Caafimaadka Daryeelka Maaliyadeed ee BC
Cheryl Cran waxay ahayd qof muhiim ah oo kahadashay Shirweynaheenna Isticmaalka - erey ahaanna waxay ahayd 'cajiib'. Qoraalkeeda muhiimka ah "Isbedelka Hogaaminta ee Degdeg Degdeg ah & Goob Farsamo," waxay ku fiicnayd kooxdeena xirfadlayaasha daryeelka caafimaadka. Dadku waxay aad u jeclaayeen iyada soonka iyo bixinta dhibcaha iyada oo ay weheliso moodooyinkeeda muujiyey 'sida' loo noqdo hoggaamiye isbeddel iyo xirfadaha loo baahan yahay. Diirada saarida xalalka waqtiga-abuurka xasaasiga ah ayaa muhiim u ahaa kooxdan waxyaabihii ficil ahaana waxay qof walba siiyeen waxyaabo aad u faa'iido badan si ficil loogu celiyo shaqadii. Moodooyinka Cheryl waxa ay ka hadlayso - kahor, inta lagu gudajiray iyo kadib khudbadda waxay ahayd mid dabacsan oo si fudud ula shaqeysa. Waxaan aad ugula talin lahayn Cheryl shirkaaga! ”
Tricia Chiama, Xiriiriyaha Sr., Adeegyada Waxbarashada iyo Waxbarista InSight
“Cheryl Cran waxay ahayd furaha ugu muhiimsan shirkeenna Sannadlaha ah, kaas oo keenaya tamar iyo raynrayn sidii af-hayeenkeenna furitaanka iyo xidhitaanka shirkeenna. Cheryl waxay la wadaagi jirtay aragtideeda iyo aqoonteeda mustaqbalka shaqada iyo isbedelka hogaaminta, iyadoo u habeynaysa soo bandhiggeeda ganacsigeenna iyo dhagaystayaasha. Waxaan si dhow ula shaqeynay iyada si aan u hubinno in farriinta kullanka oo dhan la isku waafaqay, la xiriira, iyo qiimo aad u sarreeya u leh kooxdayada iskaashiga leh. Waxay gacan ka geysatay sidii ay u dhiirrigelin laheyd kooxdeena, iyadoo dadka uga tageysa fikrado ay ku dhaqaaqi karaan isla markiiba adduunka maanta xawaaraha isu beddelaya iyo goobta shaqada. Waxaan runtii qadarin weyn ka helnay Cheryl sida fure u ah oo aan uga mahadcelineyno doorkeeda ku aaddan dhiirrigelinta hay'addeenna si aan uga fikirno oo aan wax uga qabno si ka duwan sidii aan u guuleysan lahayn mustaqbalka. ”
Pat Kramer, maamulaha guud BDO Kanada
Cheryl Cran waxay ahayd aftahankeena muhiimka ah shirkeena sanadlaha ah ee SilkRoad iyadoo erey ahaan ay ahayd mid aad ufiican! Dhageystayaasheena aqoonta u leh HR ayaa si buuxda u qanciyay qaabka Cheryl iyo gudbinta waxyaabo aad u qiimo badan, la xiriira oo muhiim ah oo ku saabsan isbedelka hogaaminta iyo mustaqbalka shaqada. Cheryl waxay dhamaanteen ku xujeysay in aan 'kor u qaadno hogaaminta OS-ga' iyo in aan ka faa'iideysano hal-abuurnimadeena waqtiga dhabta ah. Waxay bixisay macnaha guud ee dhagaystayaasheena ay u baahan yihiin si ay u fahmaan sida loo hogaamiyo loona maareeyo isbedelka saameynta leh.
J. Shackleton, Maamulaha Guud SilkRoad
“Cheryl waxay ahayd mid ka mid ah xubnaheena khudbadda ugu jeedinaysa shir sannadeedka hogaamiyayaasheeda - Cheryl qodobka muhiimka ah ee Mustaqbalka Shaqada Hadda wuxuu ahaa mid ku habboon kooxdeena. Wershadaha dhaqaaluhu waxay kujirtaa is badal weyn iyo carqaladayn - Cheryl waxay soo bandhigtay cilmi baaris iyo qalab loogu talagalay hogaamiyayaasheena si loo kordhiyo hal abuurka iyo hal abuurka inta ay madadaalo leeyihiin. Farriinteedu waxay gacan ka gaysatay inay ina xasuusiso waxyaabaha aan u baahan nahay inaan maalin walba samayno annagoo ah hoggaamiyeyaal taas oo dhiirrigelinaysa koritaanka iyo hal abuurka. Fiidiyowga leh tirakoobyada iyo tusaalayaasha daraasadda daraasadda ee ay ka bixisay shirkadaha iyagu safka hore kaga jira mustaqbalka istaraatiijiyad shaqo ayaa gacan ka siisay macnaha guud ee waxa aan horeba u qabanno oo aan si wanaagsan u sii socon karno. Kooxdayada hogaaminta wax garadka ah ayaa dhiirrigelisay Cherylna way ku baraarugtay farriimo muhiim ah oo ka imanaya dadkii ka hadlay oo ka dhigaya furaha ugu weyn ee shirkeenna! ”
L. Skinner Madaxa First West
Waxaan Cheryl u noqonay afhayeenkeena muhiimka ah iyo bandhigeeda "Dowladaha Tamarta Leh - Sirta Ku Saabsan Wax Soo Saarka iyo Waxqabadka Goobta Shaqada" waxaa si wanaagsan u soo dhoweeyay wufuudayada. Sahaminta kahor-dhacdo ee Cheryl, oo aan u dirnay magaceeda, ayaa u ogolaatay iyada inay u habeyso barnaamijkeeda iyada oo ku saleysan jawaabihii ay heshay, waxay soo bandhigtay bandhig ay ka buuxsantay tamar aad u fara badan bilow ilaa dhamaad. Daraasada Cheryl ee mustaqbalka shaqada iyo istiraatiijiyadeeda ku saabsan sida loo horseedo isbedelka iyadoo la adeegsanayo tamarta ayaa horseed u ahayd. Mahadsanid Cheryl! ” Maamulaha T. Tse, Dhacdooyinka Xirfadlayaal Xirfad Leh oo Xirfadlayaal ah oo ka tirsan British Columbia
"Muhiimadda Cheryl Cran" Mustaqbalka Shaqada - Diyaar Ma U Tahay "si hagaagsan ayey ula jaanqaadeysaa Mawduuca Shirka HRIA ee 'Raadinta Booms iyo Busts'. Cheryl waxay qaadatay waqti ay si dhab ah ubarato kaqeybgalayaasha kahor intaanay keenin muxaadarada xiritaanka aadka loo habeeyay. Sahaminta kahor-shirka Cheryl iyo imaanshaheeda subaxa kal-fadhiga si loo daawado soo-jeedinta maalinta si loo xiro waxyaabaha ay ka kooban tahay faallooyinkeeda xiritaanka ayaa aad u fiicnaa. Isticmaalka Cheryl ee cilmi baarista, aaladaha adag ee naga caawiya 'sidee' iyo qaabka isdhexgalka xiisaha leh waxay ku dhacday dhagaystayaasheena caqliga badan. Waxay ku mashquulisay kooxda su'aalo qoraal ah iyo qormadeena Twitter-ka oo is bedbeddelaysay intii lagu jiray iyo kadib fadhigeedii. Cheryl waa farxad buuxda oo aan la shaqeeyo. ”
J Chapman, CMP Machadka Kheyraadka Aadanaha ee Alberta
Cheryl Cran ayaa ka saaray beerta! Cheryl waxay ahayd furaha furitaanka shir sannadeedkeenna sannadlaha ah ee Abriil 1st, 2016 waxayna ahayd bilow fiican oo ilaa maanta ah. Waxay qabsan jirtay, dhiirrigelin lahayd, iyadoo qosol badan oo aad u badan lagu wada qabtay! Farriinteedu waxay ahayd mowduuc mowduuc aad u muhiim ah ka leh goobta shaqada maanta is beddelay. Waxaan aad ugula talin lahaa iyada shirka!
“Waxaan marlabaad ku mahadsannahay fadhigii AMAZING ee shalay. Dadkaygu waa mid ay adagtahay in la raali galiyo, isla markiiba waxaan helay jawaab celin badan oo wanaagsan ka dib hadalkaaga. Waxaad kooxda kahelaysay firfircooni, feejignaan iyo kaqeybqaadasho wixii ahaa shirkii ugu dambeeyay ee 2-maalin kickoff. Ma ahan hawl fudud. Waxaan kugula talin lahaa wakhti kasta! Mar labaad mahadsanid waxaana rajaynayaa in waddooyinkeennu ka gudbi karaan mustaqbalka dhow. ”
Xalka Warbaahinta CBC & Radio-Canada
“Cheryl Cran waxay ahayd qormadeenan qado-sharafta leh ee Shirweynaheena NOHRC 2016 - cinwaankeeda Muhiimka ah ee hogaaminta 2020 Vision - Hoggaaminta Isbedelka ee Xirfadlayaasha HR ayaa sidaas sax ugu ahaa kooxdeena khubarada HR! Farriinteeda ku saabsan hoggaanka isbeddelka iyo u diyaar ahaanta mustaqbalka shaqada hadda waa sax wixii aan dhammaanteen u baahanahay inaan maqalno. Cheryl waxay dhagaystayaasheena ku mashquulsanaanta, is-dhexgalka, oo xanaaq u xanaaqday isla markaana u dirtid su'aalaheeda oo ay si toos ah ugaga jawaabto si taxaddar leh. Waxaan ka helnay jawaab celin aad u wanaagsan ka soo qeyb galayaashayada - xaqiiqdi waxaan si aad ah ugu talin laheyn Cheryl Cran kulankaaga ama dhacdadaada! ”
Gudoomiyaha NOHRC Shirka 2016
"Waxaan u haysanay Cheryl Cran inay noqoto udub dhexaadkeena kulankeena macmiilkeena dhawaanta iyo fariinteeda" Hogaanka Isbadalka Degdega Degdega ah & Goobta Farsamada "waxay kusocotay qodob. Waxaan dooneynay aqoon xeel dheer iyo dad khibrad u leh oo fariin gaarsiin kara macaamiisheena taas oo ku kordhin doonta qiimaha ay ku leeyihiin warshadaha daryeelka caafimaadka iyo sidoo kale bixinta fariimaha goobta shaqada ee isbedeleysa. Qaabka Cheryl ee baashaalka inta ay bixinayso fariin muhiim ah oo baahi weyn loo qabay ee ah 'hogaamin wadaag', lashaqeynta jiilalka iyo ka faa'iideysiga tikniyoolajiyada ayaa waxaa kaqeybgalayaasheena si xamaasad leh uhelay. Waxaan codsanay 'qaadis' fariimo la adeegsan karo Cheryl ayaa na siisay intaas iyo in ka badan - waa hubaal inaan la shaqeyn doono Cheryl markale '.
Guddoomiye / Qabanqaabiye Shanta Sannad-Daryeel Caafimaad ee Crowe Summit Summit 2015
Cheryl Cran waxay ahayd udub dhexaad uhadalkii Madasha Hoggaanka Martida, qaybna ka ahayd Hoteelka Caalamiga ah, Bandhigga Motel & Restaurant. Dhageystayaasheena hogaamiyaasha warshadaha soo dhoweynta iyo ardayda waxay soo dhoweeyeen fariinta Cheryl ee 'hogaaminta la wadaago' iyo baahida loo qabo in kor loo qaado nidaamkiisa hawlgalka hogaamineed. Bandhigga Cheryl wuxuu ahaa mid isku dhafan oo kala duwan oo kuxiran iyada oo ay ugu mahadcelinayaan isdhexgalka dhagaystayaasheeda, kaftanka, iyo tikniyoolajiyadda. Cheryl waxay ku dhiirrigelisay kaqeybgalayaasha inay qoraal iyo fariin u diraan inta lagu jiro - kor u qaad weyn heerka heerka hawlgalka. Ra'yi-celinta ay ka heleen ka-qaybgalayaasheenna waxay ahayd mid aad u wanaagsan, waxayna iyadu ahayd mid aad u xun oo ku soo kordhay barnaamijkeenna shirarka.
K.Moore, Agaasimaha Shirka & Dhacdooyinka Ururka Hoteellada iyo Hoyga Mareykanka
Cheryl Cran waxay fududeysay kulankeena sanadlaha ah ee Istaraatiijiyadeed ee Fulinta bishii Febraayo 2014 waana ku faraxsanahay natiijooyinka. Caawinta Cheryl waxaan awoodnay inaan dib udhigno oo aan ku helno cadeyn fariinteena calaamadeysan macaamiisheenna, waxa ubaahan inay ka dhacaan gudaha si loo fuliyo ballanqaadka sumadda iyo waxa aan u baahan nahay hoggaamiyeyaasha fulinta sidii aan ugu beddeleyn lahayn shirkadda si aan ugu horseedno heerka xiga ee guusha. . Cheryl waxay ila qaadatay aniga iyo kooxda kahor kulanka istiraatiijiyadeed ee wicitaano taxane ah oo shirar ah si aan u aruurino fikradaha iyo xogta si aan gacan uga geysano sameynta jihada kulanka istiraatiijiyadeed. Waxay sameysay sahan internetka ah si loo soo ururiyo macluumaadka iyo aragtida shaqsiyadeed ee caqabadaha iyo fursadaha shirkadda iyo sida kooxda fulinta u aragtay mustaqbalka. Cheryl waxay leedahay awood gaar ah oo ay ku soo uruurin karto xog iyo nuxur aad u tiro badan, kala shaandheyn dhexdeeda ka dibna bixiso waddo cad oo fudud oo ka caawisa hoggaamiyeyaasha iyo ganacsigu inay koraan. Qaabkeedu waa mid toos ah hadana madadaalo leh waxayna si qoto dheer u fahmeysaa koritaanka shaqsiyeed ee uu u baahan yahay shaqsi kasta si isaga ama iyadu ay awood ugu yeeshaan inay wax ku biiriyaan heerar sare himilooyinka guud ee shirkadda. Cheryl oo ah khabiir ku xeel dheer hogaaminta waa latashi, hal abuur iyo natiijooyinka diirada la saaray waxaan rajeyneynaa inaan markale la shaqeyno iyada. ”
Ron Laudner, Maamulaha Guud Isgaarsiinta Omnitel
Soo bandhigida Cheryl Cran ee kooxdeena Fulinta, Hogaamiyaasha Sare iyo kuwa kaleba waxay ku jirtay erey, TIMELY! Waxaan qabannay shir sannadeedka hoggaankayaga oo Cherylna wuxuu ahaa af-hayeenka xafladda labadeena maalmood. Awoodeeda ay ku duubto waxyaabaha hada ku jira xaalada shirkadeed sidoo kale ku soo bandhiga qaab hab xiise leh, caqli iyo fikir ku dheehan tahay waa wax la yaab leh. Waxaan ka helnay jawaab celin wanaagsan oo ka soo baxday fadhigii Cheryl iyada oo faallooyinka in farriinteedu ay tahay tii ugu fiicneyd ee ku soo dhowaa dhacdada laba maalmood iyo in ay dareemeen dhiirigelin iyo rabitaan in ay u beddelaan qaabkooda shaqadooda ka dib markii ay maqashey. “Cheryl waxay keentay cilmi-baaris, karti ay kuxiran karto, sirdoonka caalamiga ah iyo inbadan oo gacan ka geysata sidii shirkeena looga dhigi lahaa guul la yaab leh.”
"Fariinta Cheryl Cran ee muhiimka ah ee Isbedelka" Lead Change "oo leh 2020 Vision waxay ku habboonayd lacagta! Xubnahayaga 'EO Arizona Cutub' waa ganacsato iyagu leh ganacsiyo guulo waaweyn leh waxayna ku xardheen waxyaabaha ay ka kooban yihiin iyo muhiimadda ganacsiga ee soo bandhigida Cheryl. Waxay leedahay awood u gaar ah oo ay ku xareyso kala duwanaanshaha kooxda - waxaan dhagaysannay in ka badan seddex iyo toban warshado oo dhagaystayaasha ah - waxayna awood u leedahay inay bixiso cilmi baaris heer sare ah oo xaqiijineysa baahida loo qabo hogaamiyaasha ganacsiga inay horseed u noqdaan isbedel si ay u kobciyaan ganacsiga ka faa'iideysiga xirfadaha wada xiriirka jawi shaqo shaqo oo badan. Xalalkeeda isbeddelka waxaa ka mid ah ka faa’iideysiga tikniyoolajiyadda, istiraatiijiyad u adeegsiga warbaahinta bulshada, dib u soo celinta nidaamka hawlgalka hoggaanka iyo waxyaabo aad u badan. Jawaab-celinta kooxdeena ganacsatada ah ee ka soo qaybgashay waxay ahayd inay u maleeyaan Cheryl's Keynote inuu siinayo qiimaha ugu badan ee ay guriga ku qaataan marka loo eego waxkastoo ay ku soo xaadireen dhacdooyinka waxbarasho ee hore. "Xaqiiqdii waxaan la shaqeyn doonaa Cheryl!"
Ururka Fulinta, qorshayaasha howlgabnimada ee Arizona Vantage
Cheryl Cran wuxuu ahaa khudbadeena udambeysay ee shirkii GAM ee hanti dhowrka gudaha - waa sidee midka saxda ah! Bandhigeeda ku saabsan Isbeddelka Hoggaaminaya wuxuu ku saabsanaa caqabadaha iyo fursadaha hoggaamiyeyaashayada ku jira warshadeenna. Sahaminta dhacdada kahor Cheryl waxay soo uruurisay sirdoonka dhagaystayaasha oo ka caawiyay inay si buuxda u habeyso soo bandhigideeda. Intaa waxaa dheer, way ka sii gudubtay kana sii gudubtay iyadoo baareysa soo bandhigyada iyada ka horreeya si loogu daro qeybaha ku habboon soo bandhigideeda. Waxay ahayd mid madadaalo leh, toos ah waxayna siisay kooxdeena daandaansi iyo istiraatiijiyado hoggaamineed oo qasab ah. Waxay jeceshahay inay bixiso "shey waxqabad" ah dhamaadka dadka si ay uga qaataan fikradaha ugana hirgeliyaan goobaha ay ku tababbaranayaan. Waxaan aad ugula talinayaa Cheryl xafladaada ama shirkaaga. ”
Agaasime, Shir Machadka Hanti-dhowrka Gudaha
Cheryl Cran waxay ahayd khudbadeena ugu muhiimsan maalinta 2aad ee Shirkeenna UniverCITZy ee Wasaaradda Teknolojiyada BC, Hal-abuurka iyo Adeegyada Muwaadiniinta waxayna sidoo kale qabatay aqoon isweydaarsi dabagal ah sidoo kale waxay lahadashay Kooxdayada Fulinta quraacdii. Hogaamiyaha muhiimka ah ee Cheryl ee leh Himilada 2020 iyo aqoon isweydaarsigeeda Hogaamiyaha Evolutionary wuxuu ahaa mid aan caadi ahayn! Waxay gabi ahaanba laheyd dhagaystayaasheena oo labaduba nool oo toos ujooga dhagaystayaasha durugsan ee doonaya inbadan. Qaabka gaarsiinta gaarka ah ee Cheryl waxaa ka mid ah in si deg deg ah oo xariir leh loola xiriiro kooxda, iyadoo la siinayo fikrado aragti iyo fikir kicinaya, fikradaha wax ku oolka ah iyo xalalka aan ku dhaqan galino. Muusiggeeda ayaa naga dhigtay inaan ku dheelno kuraasigeenna, isdhexgalka ayaa naga mashquuliyay oo nuxurka ayaa naga ballaadhiyey fekerkeenna. Waxaan hubaal la shaqeyn doonaa Cheryl markale! ”
S. Biblow, Lataliye Sare, Waxqabadka & Waxqabadka Ururka Wasaaradda Tiknolojiyadda BC, curinta iyo Adeegyada Muwaadinka